समाचार - बोतलबंद पानी र माइक्रोप्लास्टिक्स को लागी भन्नुहोस्
यो शनिवार, १thसेप्टेम्बर, एक विश्वव्यापी अभियान फेरी आउनेछ: सफाई दिवस विश्व सफाई द्वारा आयोजित। आमा प्रकृति को रूप मा स्वयं सफाई को लागी एक सीमित क्षमता छ, कार्यक्रम को उद्देश्य विभिन्न स्थानीय पर्यावरणीय कार्यहरु को माध्यम बाट ग्रह मा योगदान गर्ने हो। यो दृष्टि अरबौं मानिसहरुलाई आस्तीन रोल गर्न को लागी प्रेरित गर्न को लागी छ र उनीहरु ले लिन सक्ने कुनै सकारात्मक कार्य दर्ता गर्न को लागी हो। यहाँ सम्म कि सानो कार्य फरक को एक संसार बनाउन सक्छ!
सफाई घटनाहरु लगभग हरेक देश मा आयोजित छन्। मुख्य लक्ष्य ठोस फोहोर र समुद्री मलबे समस्या संग लड्नु हो। समुद्री मलबे समुद्र तट दृश्य र समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को स्वास्थ्य लाई प्रभावित गर्दछ, जो बारी मा समुद्री अर्थव्यवस्था मा एक प्रभाव छ। यस्तो समुद्री मलबे फोहोर छालहरु को रूप मा किनारा मा धोइन्छ। तसर्थ, समुद्र तट संगै रद्दीटोकरी पिक अप महत्वपूर्ण सफाई घटनाहरु को सबै प्रकार को बीच हो।
(छवि स्रोत: worldcleanupday.nl)
(छवि स्रोत: unsplash.com)
जताततै बोतलको पानी! समुद्र तट मा धेरै फोहोर बोतलबंद पानी हो। संसारले बोतलबंद पानीमा हरेक बर्ष १०० बिलियन डलर भन्दा बढी खर्च गर्दछ। यो गैर recyclable रूपमा, समुद्री जीवन र प्रकृति को लागी साँचो लागत हाम्रो कल्पना बाहिर जान्छ। अन्वेषकहरु माइक्रोप्लास्टिक्स को मानव स्वास्थ्य को लागी सम्भावित विशाल खतरा को बारे मा चिन्तित छन् किनकि अध्ययन बाट देखिएको छ कि बोतलबंद पानी मा माइक्रोप्लास्टिक्स हुन्छ। बोतलबंद पानी को उपयोग मतलब microplastics को ठूलो सेवन।
(छवि स्रोत: statista.com)
Statista.com को इन्फोग्राफिक को रूप मा देखाउँछ, microplastics को सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो कि हाम्रो शरीर मा प्रवेश गर्दछ बोतलबंद पानी हो। अझै पिउने ट्याप पानी धेरै राम्रो हुनेछैन ... जवाफ? एक पिउने पानी फिल्टर! रिभर्स ओस्मोसिस फिल्टरेशन टेक्नोलोजी तपाइँको पानी मा माइक्रोप्लास्टिक्स को बिरुद्ध रक्षा गर्न को लागी महान समाधान हो किनकि यो सबै कुरा हटाउँछ जब सम्म त्यहाँ H2O बाहेक केहि बाँकी छैन।
रिवर्स ओस्मोसिस के हो?
जब विभिन्न नुन एकाग्रता को दुई समाधान एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग गरीन्छ, एक प्राकृतिक तरीका मा, पानी कम केन्द्रित पक्ष को समाधान बाट उच्च केंद्रित पक्ष को सन्तुलन खोज्न को लागी झिल्ली को दुबै छेउमा सांद्रता सम्म बग्नेछ, बराबर।
यो प्रक्रिया को लागी कुनै उर्जा को आवश्यकता पर्दैन। र यदि हामीले भर्खरै वर्णन गरेको के विपरीत गर्छौं, यो वास्तव मा उर्जा लिन्छ। तपाइँ प्राकृतिक प्रवृत्ति लाई पराजित गर्न को लागी उच्च केंद्रित पक्ष मा अधिक दबाव आपूर्ति गर्न को लागी र झिल्ली को सानो पोल को माध्यम बाट पारित गर्न को लागी पानी को प्रवाह धक्का र शुद्ध पानी को एक प्रवाह प्राप्त गर्न छ। यो प्रक्रिया मा प्रयोग गरिएको प्रविधि उल्टो असमस पानी उपचार भनिन्छ।
RO पानी बाट दूषित पदार्थहरु लाई हटाउन र पानी को गुणस्तर मा सुधार गर्न को लागी सबैभन्दा प्रभावी तरीका मध्ये एक हो। हाम्रो उत्पादन सूची मा जानुहोस्एकदम नयाँ आरओ उत्पादन वा अधिक पिउने पानी उपचार समाधान सुविधाहरु आरओ टेक्नोलोजी फरक पार्न। आज हामी पहिले को तुलना मा एक जोडिएको संसार मा बाँचिरहेका छौं, र प्रत्येक र एक एकल व्यक्ति अरुलाई पछ्याउन को लागी एक उदाहरण सेट गर्नु पर्छ। बोतलबंद पानीलाई नभन्नुहोस्। प्लास्टिकलाई होइन भन्नुहोस्। तपाइँ पानी प्रदूषण, समुद्री संकट, र यहाँ सम्म कि जलवायु परिवर्तन को अन्त्य गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ!
पानी कार्ट्रिज फिल्टर प्रतिस्थापन, पानी फिल्टर प्रणाली ट्याप गर्नुहोस्, फिल्टर कार्ट्रिज, हार्ड पानी को लागी पानी शुद्ध, सर्वश्रेष्ठ रिवर्स असमस प्रणाली, सम्पूर्ण घर पानी शुद्धीकरण,